« Carnaval de Madagascar » : hanokatra ny « Fetin’ny Mozika » | NewsMada
Fety maroloko ny amin’ity faran’ny herinandro ity. Efa nanomboka omaly, nisomebiseby ny tetsy Mahamasina, manomana ny « Carnaval de Madagascar », anio sy rahampitso.
Efa tapaka ny lalana manodidina an’i Mahamasina, omaly… Ho an’ireo tsy mbola mahafantatra, hotontosaina manoloana ny kianjabe ny « Carnaval de Madagascar », hanomboka anio. Hetsika maroloko izy ity kanefa hibahana kokoa ny fanehoana ny kolontsaina, ny mozika, ny fitafy ary ny dihy manerana ireo faritra sy foko eto amin’ny Nosy.
Tafiditra anatin’ny fanamarihana ny « Fetin’ny mozika » ihany koa ka fantatra fa hisy ny sehatra goavana, hanaovana fampisehoana maimaimpoana. Hanafana izany ny tarika Mage 4, anio, ary hotohizan-dry Samoëla, ny alahady.
Raha toa ka teny amin’ny Araben’ny Fahaleovantena no nanaovana ireo andiany teo aloha, nafindra etsy Mahamasina izany, noho ny antony maro. Voalohany ny toe-draharaha politika ka sao mifangaro ny hetsika. Eo koa anefa ny fandaminana ny tanàna amin’ny ankapobeny, satria efa mampiditra ihany koa ny Fetin’ny Fahaleovantena ny “Carnaval de Madagascar”.
Mikasika indrindra ilay tena “carnaval”, mpandray anjara any amin’ny 2.000 any no handrasana amin’io, hiainga eny amin’ny Tranombokim-pirenena, hihodina ny farihin’Anosy ary hifarana eny Mahamasina.
Tsy kolontsaina ihany fa havoitra ihany koa ny lafiny toekarena, amin’ny alalan’ny fizahantany sy ny vokatra mampiavaka ny isam-paritra. Hisy hatrany ilay “Tsenaben’ny faritra”, natao hanehoana sy hivarotana ireo vokatra mampisongadina ny faritra tsirairay.